Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game 1.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Application မ်ား ႐ုပ္ျပမ်ား Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game
Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ရီးရဲလ်စက်ရုပ်မိကျောင်း - စက်ရုပ်ေူပာင်းလဲရေးကိုဂိမ်းနဲ့အခြားစက်ရုပ်ပြောင်းလဲဂိမ်းများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်စက်ရုပ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပြည့်စုံစက်ရုပ်တိုက်ပွဲတွေဂိမ်းတွေနဲ့အတူက, အနာဂတ်စက်ရုပ်များနေသောမိကျောင်းစက်ရုပ်များ၏အမျိုးအစားထဲမှာအသွင်ပြောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုချစ်လျှင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးစက်ရုပ်အသွင်ပြောင်းဂိမ်းများနှင့်အသွင်ပြောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုခံစားပါ။ ဒါဟာအချိန်အနာဂတ်စက်ရုပ်သင်မိကျောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်စက်ရုပ်ဂိမ်းအသွင်ပြောင်းပျော်မွေ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ နဂါးစက်ရုပ်အသွင်ပြောင်းထက်၎င်း၏ပိုကောင်း, အပြောင်းလဲစက်ရုပ်မိကျောင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သငျသညျဂိမ်းအသွင်ပြောင်းအများအပြားစက်ရုပ်ကစားကြလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အခြားအရာအားလုံး beats ကြောင်းစက်ရုပ်အသွင်ပြောင်းဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစက်ရုပ်မိကျောင်းဂိမ်း smoothest ထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာစက်ရုပ်မိကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်တကွကြွလာ။ အဆိုပါ robo မိကျောင်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုကို ယူ. ဘေးဥပဒ်တပ်ဖွဲ့တွေမြို့ကိုဖယ်ရှားပစ်။ ကျနော်တို့အထဲကစက်ရုပ်မိကျောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းအသွင်ပြောင်းဆင်တူကြောင်းကတိပေး။ အခြားမည်သည့်တိရိစ္ဆာန်စက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက်မမြင်ရတဲ့ဂိမ်းတိုက်ခိုက်ခြင်းအကောင်းဆုံးစက်ရုပ်အာဏာလျှပ်စစ်ဖြင့်အတူပြောင်းလဲစက်ရုပ်ကိုဖွိုဖကျြ။ ဒီစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြားမည်သည့်စက်ရုပ်အရေးယူဂိမ်းထက်ပိုမိုနှင့်ပြည့်စုံ။ သငျသညျစက်ရုပ်မိကျောင်းဂိမ်းအတူစိတ်လှုပ်ရှားပထမဦးဆုံးလက်ရအနာဂတ် robo တိုက်ပွဲများနှင့်အတူကြွလာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားစက်ရုပ်မိကျောင်းဂိမ်းများကိုတွေ့ကြုံခံစားဘူး။ သငျသညျရေအောက်ဂိမ်းအတွက်ရေအောက်စက်ရုပ်ကိုခံစားတဲ့အခါမှာဒါဟာအားလုံးပြောင်းလဲစေပါသည်။ Robo မိကျောင်းပုဆုံးရှုံးကြောင့်သာဘေးဥပဒ်အပေါင်းတို့ဖကျြဆီးနေသည်တစ်ချိန်ကကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိကျောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုသာအသစ်သောစက်ရုပ်ဂိမ်းတွင်တွေ့မြင်နေတဲ့စိတျလှုပျရှားစရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်စတင်သည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲစက်ရုပ်ကိုမှန်ကန်စက်ရုပ်ဂိမ်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးကဒီ robo croc ဂိမ်းစေသည်။ အဆိုပါ croc စက်ရုပ် & စက်ရုပ်မိကျောင်းအသွင်ပြောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုအကောင်းဆုံးစက်ရုပ်အသွင်ပြောင်းအတူပါလာ။ အဆိုပါပြောင်းလဲစက်ရုပ်တိုက်ခိုက်ခဲစက်ရုပ်အသွင်ပြောင်းနှင့်အတူအခြားအစက်ရုပ်ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲဂိမ်းမှာတွေ့ရတဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူစက်ရုပ်အသွင်ပြောင်းဂိမ်းအရှိဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်၌အကြှနျုပျတို့၏ croc စက်ရုပ်ကိုခံစားလာကြ။ သင်ဤစက်ရုပ်မိကျောင်းဂိမ်းပေါ်တွင်သင်၏လက်၌အရတဲ့အခါသင်စက်ရုပ်အသွင်ပြောင်းဂိမ်းကဆက်ပြောသည်ရှိသမျှသည်အခြားသောဂိမ်းမေ့လျော့ကြလိမ့်မည်။ သငျသညျစက်ရုပ်တိုက်ပွဲတွေဂိမ်းကစားခြင်းကိုခစျြကြလျှင်ဖြစ်လျှင်ဤစက်ရုပ်အရေးယူ Simulator ကိုအသစ်နှင့်ထူးခြားသောတိုက်ပွဲများစက်ရုပ်ဂိမ်းသို့မဟုတ်စက်ရုပ်ဂိမ်းအသွင်ပြောင်းတတ်၏။ အကောင်းဆုံးကိုစက်ရုပ်ဂိမ်းထဲမှာမိကျောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်း၎င်း၏အချိန်။
ရီးရဲလ်စက်ရုပ်မိကျောင်း - စက်ရုပ်ေူပာင်းလဲရေးကိုဂိမ်းကျနော်တို့အနာဂတ်စက်ရုပ်၏ဂိုဏ်း၌တည်ရှိ၏ကျနော်တို့ဒီ app စက်ရုပ်မိကျောင်းဂိမ်းအပြင်အကောင်းဆုံးစက်ရုပ်ဂိမ်းအကြားအဆင့်ပါလိမ့်မည်ခံစားရဘယ်ကြောင့်ဟုခံစားရထားတဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မိကျောင်းတာဝန်ခံ၌သင်တို့ကိုထားစေမည်။ မိကျောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုလာမယ့်အကောင်းဆုံးဂိမ်း။ ဒါဟာ swag ၏ညာဘက်ငွေပမာဏကိုဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်ဂိမ်းအသွင်ပြောင်းအခြားမည်သည့်စက်ရုပ်အတွက်ပျော်မွေ့ခဲ့ပါသည်ဂိမ်းတစ်ခုကစားနဲ့အတူလာမယ့်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှအသွင်ပြောင်းစက်ရုပ်တိုက်ခိုက်မှုဆောင်ခဲ့အတူ robo မိကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုအအေးဆုံး robo croc နှင့်အတူစက်ရုပ်အရေးယူ Simulator ကိုမှသင်တို့ကိုရပ်တန့်ပါ။ တစ်ဦး wow နှင့်အတူမိကျောင်း Simulator ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုမှစက်ရုပ်အရေးယူဂိမ်းအားဖြင့်အကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ စက်ရုပ်ဂိမ်းအသွင်ပြောင်းငါတို့အစွမ်းသတ္တိနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းဆုံးမိကျောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းကိုဆောင် ခဲ့. ဤအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုပ် Simulator ကိုကြိုေူပာင်းလဲရာစက်ရုပ်ပြောင်းလဲနှင့်အတူစစ်မှန်သောစက်ရုပ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စက်ရုပ်မိကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံစားရသည်။ ရီးရဲလ်မိကျောင်းပြောင်းလဲဂိမ်းများကိုခစျြတဲ့သူအဖြစ်ကောင်းစွာလေးတွေများအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်မယ့်နေသည်။
ရီးရဲလ်စက်ရုပ်မိကျောင်း - စက်ရုပ်ေူပာင်းလဲရေးကိုဂိမ်းကိုသင် robo မိကျောင်းနှင့်အတူမြို့မအုပ်စိုးဘယ်မှာမိကျောင်းစက်ရုပ်ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေနဲ့စက်ရုပ်အရေးယူဂိမ်းသစ်များအရသာတတ်၏။ ဒါဟာအစဉ်အဆက်မိကျောင်းစက်ရုပ်နှင့်အတူတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးစက်ရုပ် croc ဖွငျ့ဖျြောထူးခြားသောလုပ်ရပ်များပာနဲ့လတ်ဆတ်တဲ့ robo croc ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရာသီအနာဂတ်စက်ရုပ်များနှင့်အတူစက်ရုပ်ဂိမ်းစက်ရုပ်တိုက်ပွဲတွေဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးစက်ရုပ်အရေးယူတိုက်ခိုက်နေအဘို့ဖြစ်၏။ ယခုရာသီကိုမှန်ကန်စက်ရုပ်ဂိမ်းဆိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စက်ရုပ်တိရိစ္ဆာန်ဂိမ်းထံမှစစ်မှန်သောမိကျောင်းဂိမ်းအတွက်အနာဂတ်စက်ရုပ်ကိုထိန်းချုပ်။
လေ့လာစူးစမ်းဖို့နဲ့ Big ပတ်ဝန်းကျင်
ဂိမ်းအသွင်ပြောင်း Awesome ကို animations တွေကိုစက်ရုပ်
ပျံတိရိစ္ဆာန်စက်ရုပ် Visual Effects
မိကျောင်းစက်ရုပ်တိရိစ္ဆာန်ဂိမ်းထဲကနေမတိုင်မီမသိမမြင်ရမစ်ရှင် Fighting ။
Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game အား အခ်က္ျပပါ
brjogos34 စတိုး020
Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Machine Dreams Inc
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://machinedreamsinc.com/privacypolicy.htm
လက်မှတ် SHA1: 25:2D:A5:A4:2B:8A:0C:8B:F4:F5:B8:D5:70:C5:43:26:CA:FB:DC:B0
အဖွဲ့အစည်း (O): Machine Dreams
Real Robot Crocodile - Robot Transformation Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ